Deni & Axmed Madoobe oo kawada hadlay isbadalka Siyaasadeed ee dhacay. - Awdinle Online
Deni & Axmed Madoobe oo kawada hadlay isbadalka Siyaasadeed ee dhacay.
Madaxweynayaasha DG Puntland Siciid Cabdullaahi Deni & Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa xiriir telefoon oo dhexmaray waxa uga wada hadleen isbadalka cusub iyo qaabka markale ay u wajihi karaan wadahadalka uu iclaamiyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Deni & Madoobe oo culeyska uga badan kala hortagay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Dowlad-Goboleedyada Galmudug, Koofur Galbeed & Hir-Shabeelle ayaa kawada hadlay sidii ay u dejin lahaayeen qorshe cusub oo ay kula jaanqaadanayaan isbadalka soo kordhay.
Saraakiil katirsan Dowlad-Goboleedyada Puntland & Jubbaland ayaa Mustaqbal u sheegay in Welwelka dhanka amniga weli uu taagan yahay maadaama xiisaddii taagneed gacan-qaad toos ah habeenno kahor sababtay, wax isbadal ah kuma imaan doona ilaaladii badneed oo ay usoo wateen Axmed Madoobe & Siciid Deni Magaalada Muqdisho.
Ilo kale ayaa sheegay Safarka Madaxweynayaasha Dowlad-Goboleedyada Jubbaland & Puntland uu ku beegan yahay todobaadka soo socda, Sabtida oo ah 1-da May 2021 waxaa Golaha Shacabka BFS hortagaya Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi, waana tan keentay in safarkooda ay la sugaan natiijada kulankaas kasoo baxda
Previous articleWariyeyaal u dhashay dalka Spain oo la dilay
Next articleFaah faahin:- Qaraxa ka dhacay Magaalada Muqdisho